IMEX America dambi baa lagu helay! Shirar iyo Shirar Cusub Ayaa Soo Laabtay!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » IMEX America dambi baa lagu helay! Shirar iyo Shirar Cusub Ayaa Soo Laabtay!
Shirka Warka Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wtn
Aasaasaha IMEX oo sharaf leh oo sharaf leh Ray Bloom ayaa ku sugnaa qolka warbaahinta ee IMEX America ee Las Vegas ee Xarunta Shirarka Mandalay Bay Hotel maanta.
Wuu sameeyay! IMEX wuu sameeyay!
IMEX America waxay waydiisanaysay la kulanka xirfadlayaasha inay yimaadaan, iyo World of Dalxiiska ayaa ka jawaabay bandhiga Las Vegas ee IMEX AMERICA 2021.
Dabaqa mashquulka badan, iibsadayaasha, bandhigayaasha, iyo xirfadlayaasha dalxiiska ayaa u duulay Sin City maanta si ay u tusaan aduunka: Shirka iyo Warshadaha Dhiirigelinta ayaa si buuxda ugu soo laabtay.
eTurboNews iyo Shabakada Dalxiiska Adduunka ayaa ka mid ah bandhigayaasha.
Xubnaha WTN ee booqday goobta WTN waxay wadaageen waaya aragnimadooda.
Suresh Nakarmi oo ka tirsan Shakti Travels and Tours ee Nepal ayaa yiri: “Waa inaan la kulannaa asxaabtii hore oo aan qorno ganacsi weyn. Waxaa jira waqtiyo dhalaalaya oo ku wajahan safarka caalamiga ah iyo warshadaha dalxiiska."
"Waxaan haynaa boosas badan oo loogu talagalay Bali sanadka soo socda, ayay tiri Rico Tandage.
Tan waxaa ka dhawaajiyay seddex shir jaraa'id oo ay qabatay Destination International, Discover Puerto Rico CEO oo ku dhawaaqay hal rikoor ka dib, iyo Booqo California maanta.
Daawo muuqaalada maalinta 1:
New Path Towards Faster COVID-19 Diagnosis Paved in Gold January 22, 2022
Jamaica iyo Dominican Republic Waxay Xoojiyeen Iskaashiga Dalxiiska Cusub January 20, 2022
Warshadaha safarka ee Mareykanka: Siyaasado cusub ayaa loo baahan yahay si loo soo celiyo baahida safarka January 20, 2022